Askari ka tirsan Booliska Kenya oo Mombasa lagu dilay, Qorigii uu watay iyo lacagna laga qaatay – STAR FM SOMALIA
Askari ka tirsan ciidamada Booliska dalka Kenya, ayaa lagu toogtay Bartamaha Magaalada Mombasa ee dalka Kenya, kadib markii rag hubaysan oo aanan haybtooda la aqoonin ay dileen Askarigaasi.
Askariga la dilay ayaa lagu toogtay xaafada Likoni ee Magaalada Mombasa ee Gobolka xeebta, xilli uu ku sii jeeday Saldhiga uu shaqada kaga qornaa.
Rag hubaysan oo Bistoolado wata ayaa Askariga toogtay, kadibna waxa ay ka qaateen qorigii uu watay ee uu ku shaqeynaayay, iyaga oo meesha ay Askariga ku dileen ka baxsaday raggaasi.
Nimanka toogtay Askariga ayaa watay Mooto, waxaana ay ka dhex toogteen Mootadii ay saarnaayeen, iyaga oo hubsaday kolka askariga uu geeriyooday inay horay uga sii qaateen qorigii uu haystay.
Qoriga ay ka qaateen Askariga ayaa ahaa nooca loo yaqaan G3 oo ay rasaas ku jirtay, iyo lacag aan cadadkeeda la aqoonin.
Ilaa iyo hada ma jirto cid loo soo xiray dhacdadaasi, hase ahaatee booliska ayaa sheegay in ay baacsanayaan kooxda burcadda ah ee falkaasi geysatay.
Magaalada Mombasa ayaa waxaa kusoo noqnoqda weerarada noocaan ah oo lagu eedeeyo dhalinyaro kasoo jeedda deegaanka, iyadoo ciidamada amaankana ay dadaallo adag ugu jiraan sidii ay ula tacaali lahaayeen.